4 izinhlelo zamasikati nobusuku ehlobo | Bezzia
Izinhlelo ezi-4 zantambama nobusuku ehlobo
UMaria vazquez | 14/07/2021 10:00 | Ukuzilibazisa
Manje njengoba isimo sezulu esihle ekugcineni sesifikile, sekuyisikhathi sokusebenzisa kakhulu ihlobo. Kanjani? Ukujabulela izinhlelo esizithola zikhanga enkampanini ehamba phambili. Ngoba yize ubhadane lungakadingi ukuqonda, ziningi izinhlelo zokwenza lokho chitha ihlobo ntambama nobusuku ngaphandle kokuyekethisa.
Uyawuthanda umculo obukhoma? Ingabe ukhetha ubuciko? Yini oyithanda kakhulu ukujabulela ukukhululeka ngaphandle nasenkampanini enhle? Sinezinhlelo zawo wonke umuntu. Ngokuqondile ezine ezilungele i- ukujabulele njengombhangqwana noma nabangane ngaphandle kokuya kude kakhulu nomuzi.
1 Ubuciko nesidlo sakusihlwa okufanele kwenziwe
2 Idina ne-cocktail
4 Ukuphunyuka emaphandleni nobusuku behhotela
Ubuciko nesidlo sakusihlwa okufanele kwenziwe
Intambama yobuciko ihlale iyindlela enhle yokujabulela ntambama ehlobo. Hlola i-ajenda yedolobha lakho bese ukhetha umbukiso wobuciko okhangayo kuwe. Thenga ithikithi lakho ku-inthanethi futhi ujabulele ngaphandle kokuxhamazela, usebenzisa umoya opholile ehholo lombukiso noma emnyuziyamu ohlela umhlangano. Ngezikhathi zantambama ezishisayo ehlobo, ngabe likhona icebo elingcono?
Uma uphuma, iya endaweni esedolobheni lakho elungisa ukudla ozohamba ngakho. Khetha eyodwa wonke umuntu akhuluma ngayo noma leyo ohlale ufunda izibuyekezo ezinhle ngayo futhi awukabi nethuba lokuzama okwamanje. Khetha okuthandayo kakhulu ngemenyu yakho futhi unikeze umlando omuhle ngayo kokusha ku- kuvulandi noma ithala. Ngemuva kwemini enkulu emnyuziyamu, akukho lutho olungcono njengokukhululeka nokujabulela inkampani enhle ekhaya, awuvumi yini?
Isidlo sakusihlwa sokuqala endaweni yokudlela noma ehhotela Kubukeka njengohlelo oluhle lwantambama ehlobo. Indawo ye-tapas ingaba yisimo esihle santambama nabangane, kepha ungakhetha okuthile okusondelene kakhulu uma uzojabulela ubusuku nomlingani wakho.
Ngemuva kwalokho hamba uye endaweni ene imenyu ebanzi ye-cocktail ukwelula ubusuku. Uzoba nesikhathi ongasoze wasikhohlwa. Akunakuba ngenye indlela uma sihlanganisa isimo sasehlobo, inkampani enhle nama-cocktails asayina. Awuyazi yini indawo enjengaleyo? Faka iGoogle isebenze noma ubuze abangani bakho.
Kulo nyaka imikhosi emikhulu ngeke ikwazi ukugujwa, kodwa uma eminye isondelene kakhulu kunasemadolobheni amakhulu isivumela ukuthi sijabulele umculo obukhoma. I-Jardins Pedralbes Festival kanye ne Ubusuku beBotanical, eBarcelona naseMadrid, ngokulandelana, kungezinye ezithandwa kakhulu. Kepha kukhona abanye abanjengoLas Nights del Río Babel noma iWeekend Beach Festival ebuye inikeze uhlelo lomculo oluthakazelisa kakhulu futhi ivumelane nezikhathi ezintsha, ihambisane nazo zonke izindlela zokuphepha ezidingekayo.
Ukuphunyuka emaphandleni nobusuku behhotela
Ngabe ufuna ukunqamula edolobheni elikhulu? Eduze kwedolobha lethu kunezindawo eziningi esingazazi. Awufuni isikhathi esihle sokuzihlola? Thatha imoto abalekele endaweni yasemakhaya eseduzane lapho ungaphefumula khona umoya ohlanzekile futhi uchithe intambama ephumuzayo uthathe uhambo lokuhambahamba. Ungathanda okuthile okukhetheke kancane? Cishe kunenkampani endaweni ehlela ukugibela amabhayisikili, ukugibela amahhashi noma ukuhamba ngesikebhe, thola!
Ukuqedela isipiliyoni ukubhuka ubusuku ehhotela lasemakhaya kusuka endaweni futhi ujabulele ukuthula okunzima kakhulu ukukuthola ehlobo emadolobheni. Uzovuka njengokusha futhi ngemuva kwesidlo sasekuseni esimnandi ungakhetha phakathi kokubuyela edolobheni noma ukushesha ulwazi lwakho kancane endaweni oyikhethile.
Le yimibono emine yohlelo lobusuku nobusuku behlobo, kepha kuningi okuningi! Edolobheni ngalinye, unga futhi ngokwezifiso izinhlelo zakho ngokwemisebenzi ehleliwe. Bamba i-ajenda yedolobha lakho; Uzomangala ngazo zonke iziphakamiso zokuzilibazisa ezikhona futhi ongazazi.
Uyaluthanda lolu hlobo lwesiphakamiso? Ngokushesha sizozama ukukunikeza imibono egxile kwabancane.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Indlela yokuphila » Ukuzilibazisa » Izinhlelo ezi-4 zantambama nobusuku ehlobo
Isethi yebhulashi lesimonyo: Yenzelwa ini ngayinye?